Networking – Tagged "Promotion" – ICT.com.mm
Tenda W311P+ 150Mbps Wireless N150 PCI AdapterK12,300 K7,400-40%
WeGuard Universal Smart Wifi Plug (NX-SM 602)K17,600
WeGuard Smart Door Bell ( TA-DB-H1)K66,300
Ring Video Doorbell WiredK200,251 K189,712-6%
T3 Innovation Platinum Tools T62 Recon Test SetK770,400
Tenda W311P+ 150Mbps Wireless N150 PCI Adapter
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Delivers up to 150Mbps wireless speed Enhanced wireless reception Backward-compatible Secured connection Advanced WPA/WPA2 protects your network Wireless Type: ‎802.11n, 802.11b, 802.11g Product Dimensions: 13.27 x 12.08...
WeGuard Universal Smart Wifi Plug (NX-SM 602)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Input voltage: AC110-250V Input frequency: 50Hz/60Hz Max load current: 15A Max Power: 1875W Radio Technology: IEEE 802.11 B/G/N (HT20) WiFi frequency: 2.4GHz Indicator light: 1 Red LED+1...
WeGuard Smart Door Bell ( TA-DB-H1)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ No wires and cables are required, just download the APP, then connect it to your doorbell, keeping your doorbell always online, you can see, hear and speak...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 1080p HD wired video doorbell with two-way talk, advanced motion detection, standard 2.4 GHz connectivity and customizable privacy settings Get real-time notifications sent straight to your phone....
T3 Innovation Platinum Tools T62 Recon Test Set
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Multilingual (English, French, Spanish) Speaker with fine volume adjustment Adjustable earpiece volume, hearing aid compatible Noise cancelling microphone Microphone mute with toggle On/Off locking feature Soft key...
WeGuard Smart Window Door Indoor Sensor (HKWL-DWS02W)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ We Guard APP Remote Control WIFI control Ultra low power consumption Tamper vibration alarm Open/close records Support scene settings Alarm Settings Control: WIFI 2.4GHz 802.11b/g/n Power supply:...
D-Link DIR-842-P Wireless AC1200 MU-MIMO Wi-Fi Gigabit Router
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: DWR-730 Mobile Wi-Fi Hotspot 21Mbps Dual-band Wireless AC1200 (867 Mbps on5GHz + 300 Mbps on 2.4 GHz) 802.11ac with MU-MIMO Gigabit WAN and...
Tenda S16 16 Port 10/100Mbps Desktop Switch
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Tenda Colour: White Access Control: CDMA/CD MAC Address Table: 4K Switching Capacity: 3.2Gbps TEG-S16 The Tenda S16 16-Port 10/100Mbps Switch provides simple and ideal solution to...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Complies with IEEE802.11b/g/n Built-in Battery good for5hours 1 USB Power Supply Port 1 USB 2.0 Interface 1 10/100Mbps Lan/Wan port 3G150B Overview 3G150B is a...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Tenda Color: White WAN throughput:7Mbps WAN throughput upstream:5Mbps WAN ports: 1 WAN port(s) type: SIM card slot Overview The Tenda Wireless N150 Travel...
Tenda PoE 15F 100Mbps Single Port PoE Injector
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Port1 FE port: 1 data&power output port supporting PoE Power Output15W（Max. 48VDC) Indicator: Power Dimension: 84.5*44*29.8 mm. (3.32*1.73*1.17 in )(W*D*H) TemperatureOperating Temperature: 0℃ ~ 45℃ Storage Temperature:...
Tenda TEG-1210P 8-port Web Smart Gigabit Ethernet Poe Switch
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Tenda TEF1210P switch supports 8 PoE ports, which can supply power to most powered devices through 8-core Ethernet cable, and the total PoE power can be up...
Tenda TEG-1024D 24 Port Gigabit Ethernet
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ The Tenda TEG1024D 24*10/100/1000 Mbps auto-negotiation RJ45 ports, up to 2000 Mbps of full duplex transmission rate, line-speed forwarding by all ports, and large cache capacity ensure...
Tenda W1500A Wireless N150 Outdoor LR AP/Router
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Wireless Speed: 150 MB/s LAN Port: 1 WAN Port: 1 Standard IEEE: 10/100 M LAN Port 10/100 M WAN Port Product description The Tenda W1500A is an outdoor...
Tenda Wireless N150 Nano USB Adapter W311M
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Wireless N standard, speeds of up to 150Mbps 3x greater wireless range than wireless G products Secure your network with 64/128-bit WEP, WPA and WPA2 Supports soft...
Tenda 600Mbps Dual Band N60 Wireless Gigabit Router
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.3/3u/3ab Up to 300+300Mbps Wireless Data Rates 600Mbps Dual Brand N600 Gigabit Router Tenda 600Mbps Dual Band N60 Router The Tenda N60 Concurrent Dual...
Tenda TEH-2400M 24 Port 10/100M Ethernet
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ All the ports can automatically diagnosis half-/full-duplex modes Dynamic buffer area automatically allocates to realize network load balancing and prevent the packing from losing Automatically examine all...
Tenda TEG-1016D 16 Port Gigabit Switch
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ The Tenda TEG1016D 16*10/100/1000 Mbps auto-negotiation RJ45 ports, up to 2000 Mbps of full duplex transmission rate, line-speed forwarding by all ports, and large cache capacity ensure...
Tenda S108 8 Port Desktop Switch
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Tenda Model: S108 8 x 10/100 Mbps auto-negotiation RJ45 ports Compliant with IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3X standard 8 x LED indicators display the connection status Supports 10/100M full duplex...
Tenda I12 W330A 2.4G 300M 40client Ceiling Access Point
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Product Dimensions: 12.19 x 1.02 x 12.19 cm; 544.31 Grams Connectivity Type: Wi-Fi Wireless Type: 2.4 GHz Radio Frequency 300Mbps wireless transmission rate, 11N wireless standards Support...
Tenda I6 WH302A 2.4G 300M 20client Wireless High Power Access Point
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Ceiling Design High Power Design Wireless N300 Speed Gigabit Ethernet Port Power Over Ethernet(802.3at) Maximum Transmit Power400mw(26dbm) Frequency Range2.4GHz-2.483GHz Power Method802.3at PoE/DC 12V=1A Maximum wireless speed300Mbps Working...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Manhattan AC1650004 Item Name: USB-C 11-in-1 Triple-Monitor Docking Station with MST Item Code: 153478 USB-A ports 1 &2data transfer speed:5Gbps USB-A port...
D-Link 8‑Port Gigabit Unmanaged Desktop Switch (IND-DGS-108/E)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 8x Gigabit Ethernet ports Plug & play for instant connectivity Product Code: IND-DGS-108/E More Ports. More Convenience. The DGS-108 8-Port Gigabit Unmanaged Desktop Switch offers an economical way...